मलेसियामा २ कम्पनीले महिला पुरुषको गर्यो डिमाण्ड ! • raradiodarpan.com
मलेसियामा २ कम्पनीले महिला पुरुषको गर्यो डिमाण्ड !
हामी तपाईंलाई Polycore Optical (Malaysia) SDN BHD र Mettube SDN मार्फत मलेशिया (फ्री भिसा, नि: शुल्क टिकट) मा एक पदको लागि आवेदन दिन आमन्त्रित गर्दैछौं। BHD, एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठाको साथ कम्पनी, जसले आधिकारिक रूपमा जागिर रिक्तिहरू घोषणा गर्दैछ। हालको जागिर खुल्नेहरूमा निर्माण कार्यकर्ता (निर्माण सेकेन्ड) र निर्माण अपरेटर (निर्माण सेक) समावेश छ। यस कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई राम्रो सुविधा दिन्छ।
तिनीहरूका कामदार/कर्मचारीहरू तिनीहरूका लागि सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति हुन्। तसर्थ, तिनीहरूले आफ्नो शक्तिमा सबै बाधाहरू हटाउनका लागि कर्मचारीहरूको बाटोबाट कार्यस्थलमा पुग्छन्। कम्पनीले माथि उल्लेखित जागिरको लागि सम्मानजनक तलब प्रदान गर्नेछ। यो कम्पनीमा धेरै देशका धेरैले रोजगारी पाएका छन् र त्यहाँ धेरै नेपाली कर्मचारी पनि छन् ।
प्रत्येक दिन आठ कार्य घण्टाहरू छन् र हप्तामा छ कार्य दिनहरू छन्। त्यहाँ ओभरटाइम घण्टा हुनेछ, तर तिनीहरू कम्पनी नियम र नियमहरू द्वारा निर्धारित हुनेछन्। कम्पनीले कामदारहरूलाई खाना र आवास प्रदान गर्नेछ, र तिनीहरू ती लागतहरूको लागि जिम्मेवार हुनेछैनन्।
कर्मचारीहरूलाई कम्पनीको नीति अनुसार वार्षिक बिदा दिइनेछ। यस पदको अवधि दुई वर्ष हो। उम्मेदवारहरूले चाहेमा त्यस पछि थप वर्षको लागि आवेदन पेश गर्न सक्छन्। धन्यवाद
नेपाल भर्ती एजेन्सीको नाम दित्या इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड लट नम्बर २५८८६९ देशको नाम मलेसिया
कम्पनीको नाम Polycore अप्टिकल (मलेशिया) SDN BHD स्वीकृति मिति जानकारी 2078/12/01
यहाँ रहेका देशहरूमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरू छन् जहाँ तपाईं काम गर्नुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ। तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी नोट गर्न निश्चित गर्नुहोस्। आवश्यक पर्दा तपाई सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कागजातमा सूचीबद्ध रकम भन्दा बढी नदिनुहोस्
विदेश जाँदा अन्य विमानस्थलभन्दा नेपाली विमानस्थल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ, अन्यथा ठगीको सम्भावना हुन्छ ।
यदि तपाइँसँग यस विज्ञापनको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, ताहाचललाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँ वैदेशिक रोजगारको बारेमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निम्न निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
तपाइँको कोटा कति बाँकी छ भन्ने थाहा पाउँदा तपाइँलाई आवेदन दिने कि नगर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ। यो कोटा पूरा भएको सम्भव छ